I-8 engcono ye-SAT / UMTHETHO weeNkonzo zokuThuthuka kwi-Intanethi ngo-2018
by ULaura Dorwart
Fumana uncedo oluyidingayo ukufumana iimviwo
Xa ukhetha inkonzo ye-SAT / ACT inthanethi, kubalulekile ukwenza isigqibo esifanelekileyo kwiimfuno zakho ezithile. Awufuni ukuchitha ixesha kunye nemali ebalulekileyo kunye nenkonzo yokufundisa yokulungiselela i-prep tutoring service. Isikhokelo sethu kwisifundo se-SAT / ACT esifanelekileyo sokufundisa i-intanethi sinokukunceda ukhethe umqeqeshi ogqithisileyo kwaye, ngethemba, ukuba uvavanyo lwakho.
I-Customizability Best: Intsingiselo
I-SAT / UMTHETHO weeNkqubo zoThutho kwi-intanethi ungaguquleka ukuze uhambelane nantoni naziphi na iimfuno kunye neenjongo zabafundi. Emva kokuba udibene kunye noQeqesho loQeqesho kunye novavanyo kunye nokuqala kokubonisana, wena kunye noMqeqeshi (kunye nosapho lwabafundi) uya kuseka ixesha lokufunda kunye noluhlu lwamanqaku omhlaba okuza kukunceda ufikelele kwiinjongo zakho zokuhlola. Emva koko, uya kulandela isofti yokuhlola isicatshulwa imihla ngemihla, ukugqiba iimvavanyo zokuzilolonga, ukubetha kunye nemibuzo eyenziwe ngamandla akho kunye nobuthathaka. Ngaphandle kwesicwangciso esicwangcisiweyo esilungelelaniswayo njengoko i-test-taker progresser, iqinisa izifundo ezifundiswa ngumfundi eziqhubekayo kunye nokuqhubela phambili xa isakhono sichazwe kakuhle, abaqeqeshi beeTeshumbana bahlangana nabafundi ngeveki okanye ngaphezulu ukuba bajonge kwaye baxoxe ngeenkqubela zabo.
Iiphakheji zokuqeqesha ezithembekileyo zivela kwi-$ 300 / inyanga kwiphakheji eyisiseko kwi-$ 550 yeepakethe nganye ngenyanga kunye nomyalelo ongaphezu komnye, ngokukodwa ukuba wena okanye umntwana wakho ulwa nommandla othile. Inkqubo yokuqeqesha kakhulu ("i-bootcamp") ngaphezulu kweeveki ezine ukuya ezintandathu ixabisa i-$ 800. Kaninzi "
I-Guarantee ye-Money-Back Guarantee: I-Princeton Review
Ngokunyanisekileyo kwePrinceton Review
Ukuba unenkxalabo yokuchitha imali yakho kwinkonzo yokufundisa yokulinganisa engafanelekanga kuwe, khangela akukho ngaphaya kwePrinceton Review. UkuPhononongwa kwe-Princeton kunika isiqinisekiso sokubuyisela imali xa umlinganiselo wakho we-SAT okanye UMSEWU ungakhuphuki. Inkqubo yokufundisa i-Princeton yokuThuthukiswa kwe-Intanethi ye-ACT okanye i-SAT ibiza i-$ 1,800. Ukuba amanqaku akho ayiphuculanga, isikolo sakho siya kubuyiselwa. Ukuba umqeqeshi wakho akakusebenzelanga emva kweseshoni yokuqala, unokufumana omnye umfundisi kwiseshoni yokuqala yokukhulula.
Uhlelo lwe-Princeton Review SAT / ACT lwenkqubo yokufundisa lujulile kwaye lukhulu. Ngaphandle kweprogram, uya kuhambelana nabafundisi kwiinkalo ezahlukahlukeneyo kwaye ujongane nomphathi wokufundisa oya kuhlala uhlawule ngokuqhubekayo kwenkqubo yakho yokuhlola. Ukuthengwa kwephakheji yakho yokufundisa kuqukwa ukufikelela kwizixhobo ezahlukeneyo ze-intanethi, kubandakanywa ama-tutorials angaphezu kwama-140 avela kubafundisi be-Princeton Review, iimvavanyo ezininzi zokufunda ubude, kunye nemibuzo engaphezu kwama-2,000. Uza kuthatha novavanyo olubanzi olupheleleyo lwe-SAT kunye no-ACT kwisifundo seeseshoni zakho zokufundisa. Uza kulungisa kwaye uphathe inkqubela yakho kunye neeseshoni zokufundisa nge-Princeton Review apps.
Eyona ndlela ilungele ukufundiswa kwexesha elide: Kaplan
Ukuba udinga ukwandisa kakhulu umlinganiselo wakho we-SAT okanye UMSEBENZI, okanye ukuba ungumntu onokufumana inzuzo yesikhathi eside kunye nomqeqeshi we-prep test, iiphakheji ezinamandla zokufundisa i-Kaplan zingaba zifanelekileyo. Iiphakheji zokufundisa nge-Kaplan ziqala kwi-$ 2,299 yee-12 zezifundo zeeyure eziyi-12 kwaye zilungele ukuba ubuncinane ubuncinane ngenyanga. I $ 4,199, unokufumana iiyure ezingama-24 zokufundisa ngokufumaneka kwikhompyutha. Unokufumana iiyure ezingama-36 zokufundisa i-$ 5,199, eyinto efanelekileyo kubafundi abanemizuzu emibini yokufunda ngaphambi kokuba bathathe iSAT okanye UMTHETHO.
Iphakheji yokufundisa iquka i-SAT yobude obude okanye i-ACT Kaplan yovavanyo lwe-prep, kunye neeyure zokufundisa ngeyodwa, iikhompyutheni zangaphambili ze-intanethi, iimviwo ezine zobude obude, kunye nokuqhuba imibuzo ongayifumana nayiphi na ixesha ngexesha iseshoni yesifundo. Ukuthenga kwakho kuqukwa neencwadi ezimbini zee-prlan zokuhlola kunye nokuziqhelanisa okuza kukuthatha kwi-smartphone okanye kwikhompyutha. Kaninzi "
Indlela yokuSebenza kakuhle: I-Compass Prep
Ngokunyanisekileyo kweCompass Prep
I-Compass Prep ithatha ubuhlungu obukhulu ukuqinisekisa ukuba uhambelana nokuhamba kunye nomqeqeshi ongcono we-SAT okanye we-ACT ngezidingo zakho ezithile, ishedyuli kunye nesitayela sokufunda. Uza kuqala ngovavanyo lweengcali zaliphi na iimvavanyo ozenzayo ngaphambili, zilandelwa ngumsebenzi opheleleyo we-SAT okanye UMTHETHO owenziwe ngumlawuli we-intanethi ehlala. I-Compass Prep izakufanisa kunye nomqeqeshi ngokusekelwe kwiziphumo, kunye neenketho zakho.
Emva kokuba uhambelana nomqeqeshi wakho we-Compass Prep, uya kufumana ikhamera yexwebhu ukuze umqeqeshi wakho alandele inkqubela yakho ngexesha langempela. Iiseshoni zokufundisa ziqhutyelwa ngoncedo lwe-whiteboard kunye nevidiyo ye-conferencing. Uya kufumana kwakhona i-Compass Prep SAT / ACT yokusetyenziswa kwezixhobo ezifumaneka kuphela kwiCassass Prep abafundi. Kaninzi "
Eyona ndlela ihamba phambili kwiFlexibility: Study Point
Ngobubele beSifundo seSifundo
Unenkxalabo yokuba ezininzi iinkonzo zokufundisa azikwazi ukulungelelanisa ishedyuli yakho? I-Point Point yeSifundo ye-SAT / ACT yokufundisa iiphakheji ziguquguquke kwaye ziyakwenziwa nanini na. Izindlela zokuhanjiswa kwazo kunye neephakheji ziyahlukahluka ngokubanzi, kukuvumela ukuba ukhethe ukusuka kwiinketho zeendlela ozikhethele ngayo kwaye ulungele ukulungelelanisa uvavanyo lwakho lokuhlola.
Umgangatho we-Study Point SAT / ACT wokufundisa iiphakheji ziquka iiyure ezingama-30 zomntu ozimele ngasese kwi-intanethi evela kumfundisi weengcali, kunye nokufundiswa kuwo onke amacandelo ovavanyo olumgangatho. Kwakhona kuqukwa novavanyo lomntu siqu kunye nesicwangciso somsebenzi esenziwe ngokwezifiso esichazela amandla akho kunye nobuthathaka, kunye novavanyo olude olupheleleyo lweemvavanyo kunye nokuqinisekiswa kwamanani amanqanaba. Le nkqubo iyona nto ibhetele kubafundi abangazange bafunde ukuhlolwa. Inkqubo yokuphonononga ibhetele kubafundi abaye bathabatha uviwo kanye okanye abaye bafunda kwaye bafuna i-brush-up. Iquka iiyure ezingama-18 zokufundisa. Inkqubo ekhethekileyo iquka iiyure eziyi-10 zokufundisa kwaye zenzelwe abafundi abafuna uncedo olukhethekileyo kwicandelo elinye okanye amabini ovavanyo. Kaninzi "
I-SAT ephezulu / UMTHETHO Umxholo Ukulungiselela: I-Ivy Bound
Ngokunyanisekileyo kwe-Ivy Bound
Iimpawu ze-SAT kunye ne-ACT zikhethiweyo zisoloko zihoywa ngabafundi, kodwa zenza umehluko omkhulu kwisicelo sakho kwiikomiti ezininzi zokungeniswa. Ngenxa yokuba amagosa angenayo avame ukufunda iincwadana zakho nangona azinyanga, incoko ingaba yindawo enhle ukulungiselela abanye abafake izicelo kunye nokubonakalisa ubuchule bakho. Iinqununu ezininzi eziphambili ze-notch zifuna isicatshulwa sokwamkelwa, kwaye abanye basebenzise njengendlela yokukhetha abafundi ukufundiswa kwemali, izibonelelo kunye nezinye iindlela zokuncedisa ngemali. I-Ivy Bound inikeza imfundo ekhethekileyo kuzo zonke iindawo ze-SAT kunye noMTHETHO, kodwa umsebenzi wabo kunye neesayiti ze-SAT / ACT zibaluleke kakhulu.
I-Ivy Bound inikezela ngeenkonzo ezipheleleyo-nganye kunye neqela ekufundiseni kwi-ACT kunye ne-SAT test prep, kunye neendibano zentshukumo zenyanga zenyanga kunye neeseshoni zokucamngca. Unokukwazi ukuba neengqinisiso zakho zenzelwe kwaye uhlaziywe ngabaqeqeshi beengcali, ngoko unokuvavanya inkqubela phambili njengoko uqhubeka ulungiselela ukuhlolwa. Umqeqeshi weengcali ongeyena umqeqeshi wakho we-SAT / UMTHETHO oqhelekileyo uza kubhala isicatshulwa sakho emva kokuba uyithumele ngokuskena okanye ngefeksi, kwaye umqeqeshi wakho angasebenzisa ezo vavanyo zeengcoko kunye nempendulo kwiiseshoni zakho zokufundisa. Kaninzi "
IThekhinoloji ephezulu: I-Revolution Prep
Ngokunyanisekileyo kwe-Revolution Prep
I-Interface ye-Revolution Prep ye-intanethi isebenzisekile kwaye isebenzise kakuhle iteknoloji ephakamileyo ukuhambisa i-SAT / ACT tutoring quality. Ukufumana uncedo olusekhaya lwe-intanethi ukusuka kubafundi beengcali lufumaneka rhoqo ngemini yexabiso lokubhaliselwa kwe-$ 99 / ngenyanga. Ukufundiswa kwangasese kufumaneka kwi-$ 99 / iiyure, kunye nokufundisa okuzimeleyo ngasese kwiqela lezine kufumane i $ 39 / iyure.
Iiphakheji ezahlukahlukeneyo zinikezelwa ngokuxhomekeke kwishedyuli yakho kunye nokuba ufuna kangakanani amanqaku akho ukuba anyuke. I-"intensive" ye-Revolution Prep tutoring iphakheji, umzekelo, iquka imizuzu engama-48 yomyalelo kunye novavanyo olude olupheleleyo lweemviwo, ngelixa "iphakheji" iquka iiprojekthi ezingama-36 zezifundo kunye neemvavanyo eziqhelekileyo ezilishumi ezisibhozo zovavanyo. Uluhlu olupheleleyo lwezinto ezisemgangathweni, njengemibuzo yoqheliselo kunye nokuhlaziywa okwenziwe ngokwezifiso kwinkqubela phambili, ncedisa iphakheji yakho yokufundisa.
Abaqeqeshi bokuThuthukiswa koBuququzeleli basebenzi bexesha elizeleyo kunokuba baqeqeshwe ngexeshana, oko kuthetha ukuba banenzuzo enkulu yokuphucula imisebenzi, ukuhlolwa rhoqo kunye nokuqeqeshwa okuqhubekayo okuqhubekayo. Kaninzi "
Iipakethe zokuThuthukisa zonke-in-One: PrepScholar
I-SAT / ACT ye-PrepScholar yokufundisa iikhompyutheni ze-intanethi zixhomekeke ngakumbi. Zonke iiphakheji zazo zidibanisa ukusetyenziswa kwepropScholar ye-Automated Prep program yenkqubo, ehambelana nenkqubela yakho njengoko ugcwalisa ukuqhuma kwaye uqhuba iimvavanyo kwaye uphula iiseshoni zakho zokufunda kunye nezifundo zeengcali zevidiyo kunye nezifundo ezisebenzisayo, ngeeyure zokufundisa nganye. Uhlelo lwe-Prep oluzenzekelayo lubandakanya imibuzo engaphezulu kwe-1,600 ye-SAT / ACT kunye nokuhlolwa kwe-practice-full-length.
Unokukhetha ukuba yeyiphi imxube oyifunayo yenkxaso-khokelo kunye nokufunda ngokuzenzekelayo. Ngokomzekelo, iPhakheji yabo yokuHlola eVikelekileyo ikhangelelwe iquka iiyure ezine zokufundisa, ukuhlolwa kwee-regular tutor kunye neeyure ezingama-40 zezixhobo zokuzenzekelayo kwaye ulungele i $ 995. Inkqubo ehamba phambili ye-tutor ixabisa i-$ 1,995 kwaye iquka iiyure ezili-12 zokufundisa izandla kunye neeyure ezingama-40 ze-online drill.
Iiphakheji zokufundiswa kwe-Sp / SET ye-PrepScholar ziza neephakamiso zokwenyuka kwamanqaku: ama-160 amanqaku okanye ngaphezulu kwi-SAT, kunye namanqaku amane okanye ngaphezulu kuMTHETHO. Bonke abaqeqeshi bangama-99th percentile scorers kwi-SAT, ACT, okanye zombini, kunye nabo bonke abaya kwiikholeji eziphezulu. Kaninzi "
Ngaloo ndlela, abalobi bethu bezakhono bazibophezele ekuphandeni nasekubhaliseni iimpendulo ezizimeleyo nezihleliweyo zeemveliso ezilungileyo kubomi bakho kunye nosapho lwakho. Ukuba uthanda oko sikwenzayo, unokusinceda ngokusebenzisa iinqununu zethu ezikhethiweyo, ezithatha ikhomishini. Funda kabanzi malunga nenkqubo yokuhlaziya .
Izikhokelo zeewadi zePar-3s, i-Par-4 kunye ne-Par-5s
Iimpendulo "Imibuzo eyi-10 yokubuza i-Biology Teacher of You about Evolution"
I-Cancer ne-Sagittarius Uthando olufanelekileyo